November 13, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha November 13, 2019
(Borussia) 13 Nof 2019. Laacibka qadka dhexe iyo kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa shaaca ka qaaday xiddigaha uu aadka u jecelaa markii uu yaraa, waxaana ka mid ah halyeeyga reer Brazil iyo naadiga Barcelona Ronaldinho. Jadon Sancho ayaa ka mid ah xiddigaha da’ayarta ah kubadda cagta kuwooda ugu muhiimsan ee xilligan, iyadoo ay jiraan […]Sii akhriso
Madaxweyne Farmaajo oo magaalada Nayroobi kulan kula yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya+sawirro
Soomaaliya November 13, 2019
Nairobi(SONNA) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Nayroobi kula kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa ku bogaadiyay dareenka waddaniyeed ee ay u qabaan dalkooda iyo doorka wanaagsan ee ay ka qaataan xal u helista duruufaha ku xeeran. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga Sii akhriso
(Yurub) 13 Nof 2019. Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa ku wajihi doono habeen dambe dhigiisa Lithuania, kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka Euro 2020, iyadoo saddex maalin kaddib ay kula ciyaari doonaan Luxembourg wareega ugu dambeeya. Haddaba xiddiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Frankfurt ee Gonçalo Paciência ayaa wuxuu sheegay in xiddiga ay isku wadanka ka soo Sii akhriso
Xeer ilaaliyaha guud ee JDFI oo sheegay in dhacdadii 15kii Sane ka dhacday Bahardaar iyo Addis ababa uu ka dambeeyay Generaal asaaminew Tsige .
DDS November 13, 2019
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa warsaxaafadeedkii uu maanta soo saaray ku cadeeyey in dilkii 15kii sane hogaaminta sare ee dawlada loogu gaystay bahardaar iyo Addis ababa ay ahayd iskuday afganbi oo uu Birgeedher Generaal asaaminew Tsige soo abaabulay. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka mudane birhaanu tsegaaye ayaa war saxaafadeedka uu warbaahinta lawadaagay kucadeeyey inay Sii akhriso
(Liverpool) 13 Nof 2019. Weeraryahanka Manchester City ee Raheem Sterling ayaa dagaal garoonka Anfield kula galay Joe Gomez oo ah difaaca Liverpool, waxaana dagaalkooda ka hadlay halyeeyo kubadda cagta ah. Laacibka Sky Blue ee Raheem Sterling ayaa sheekadda ka bad-badis ka dhigay markii uu eegeyey tan iyo xerada tababarka xulka England. Kaddib Raheem Sterling ayaa […]Sii akhriso
(Madrid) 13 Nof 2019. Xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modrić ayaa sheegay inuu maalin uun laga yaabo inuu ka ciyaaro horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Luka Modrić ayaa dhinaca kale shegay inuu aad u jecelyahay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. 34 sano jirka Luka Mordic ayaa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo horyaalka Serie […]Sii akhriso
Ethiopia: Project Manager Ethiopia
Shaqooyinka November 13, 2019
Organization: Save the Children Country: Ethiopia Closing date: 28 Nov 2019 TERMS OF REFERENCE POSITION Project Manager AREA/DEPARTMENT International Programmes & Advocacy PLACE OF WORK Addis Abeba/Dire Dawa (Ethiopia) PEOPLE MANAGEMENT Yes BUDGET MANAGEMENT Yes TYPE OF CONTRACT Fixed term SALARY Based on experience CSP LEVEL 3 INTRODUCTION TO SAVE THE CHILDREN Save Sii akhriso
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo La Kulmay Guddoomiyaha Guddiga Midawga Yurub Ee Iskaashiga Iyo Horumarinta Caalamiga Ah
Muqdisho(SONNA) Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Brussels kula kulmay guddoomiyaha guddiga midawga Yurub ee Iskaashiga iyo Horumarinta Caalamiga ah, Neven Mimica. Kulanka dhex maray Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Neven Mimica ayaa looga hadlay xaalada dalka, gaar ahaan arrimaha dib-u-qaabeynta ee dowladdu wado. Neven Sii akhriso
(England) 13 Nof 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Man City Bernardo Silva ayaa ganaax culus garka loo galiyay kaddib markii uu fal cunsurinnimo ah kula kacay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Benjamin Mendy. Bernardo Silva ayaa lagu ganaaxay hal kulan iyo inuu bixiyo £50,000, kaddib markii uu Twitter-ka ku cunsuriyadeeyay Benjamin Mendy. Waxa uu […]Sii akhriso
(Madrid) 13 Nof 2019. Waxaa maanta la go’aamiyay waqtiga la baasanayo kulanka El Clasico ee dhax mari doono Barcelona iyo Real Madrid. Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa ku kulmi doono garoonka Camp Nou, kulankoodii ugu horreeyay El Clasico ee xilli ciyaareedkan 2019/20, 18-ka December sida la xaqiijiyay maanta oo Arbaco ah. Kulanka labadan kooxood ayaa […]Sii akhriso